Nkwupụta, Mmekọrịta na Inspirations - Ndị Na-eme nde
Nkwupụta, Mmekọrịta na Inspirations
11 afọ ahụmahụ
Ihe omume 1000 +
Ndị ahịa mba
Ogo nke Mba
Ikwupụta Okwu, Mmekọrịta na Inspira
Ndị otu na-emekọ ihe ọnụ maka ọdịmma nke ndị kwabatara
Otu Joint Council for Welfare of Immigrant bụ otu ndị ọrụ afọ ofufo nọọrọ onwe ha, na-agbachitere ikpe ziri ezi ma na-alụso ịkpa ókè agbụrụ na mbata na ọpụpụ na iwu na mgbaba.
Ndị otu na ndị ndụmọdụ mbata na ọpụpụ ọka iwu
Ndị ndụmọdụ mbata na ọpụpụ bụ ndị otu nke Association of Regulated Immigrashọndụ ndị ndụmọdụ nke bụ ọkachamara Association maka Usoro Ọpụpụ mbata na ọpụpụ na United Kingdom. Ebumnuche nke Association nke ndị na-ahụ maka mbata na ọpụpụ Immigrashọn bụ ịkwalite ọkachamara na ndị ndụmọdụ ọpụpụ ọ bụla na-achịkwa ma wulite mmekorita / nhazi ọnụ ma meziwanye nkwukọrịta n'etiti ụlọ ọrụ na ndị kwabatara maka mbata na ọpụpụ ọpụpụ.
Society maka njikwa akụ ọrụ mmadụ
Ndị ọrụ HR anyị bụ ndị otu nke Society maka njikwa akụ na ụba mmadụ ma soro usoro HR kacha mma gburugburu ụwa.
Njikọ Nka na ụzụ Ozi Canada
Enyemaka UK na Enyemaka mbata na ọpụpụ
Nde nde ndị na-eme ọrụ na ndị anyị na ha na-arụ ọrụ na-anọchite anya na n’okpuru nlekọta nke ndị ọka iwu EEA nrube isi na 84 nke Iwu Immigrashọn na Mgbapu 1999. Anyị na ndị ọrụ mbata na ọpụpụ nke UK na-ahazi na Office of the Immigration Services Commissioner (OISC). OISC bụ onye na-ahụ maka ndị ndụmọdụ mbata na ọpụpụ n'okpuru Usoro Iwu na Iwu nke Commissioner.
Enyemaka US na Ọpụpụ na US
Ndị ọkàiwu anyị ruru eru nke United States bụ ndị òtù American Bar Association na ndị òtù American Immigration Lawyers Association (AILA), tọrọ ntọala na 14th Ọktoba 1946 ma bụrụ ndị ọrụ afọ ofufo na-ahụ maka ndị ọka iwu na ndị ọkachamara 15.000 ndị na-akụzi ma na-akụzi iwu mbata na ọpụpụ.
Enyemaka njem mbata na ọpụpụ na Australia
E debanyere ndị na-ahụ maka ndị mbata na ọpụpụ nke Australia na ndị ọka iwu na ndị na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ndị na-ahụ maka mbata (MARA) nke bụ ngalaba ndebanye aha maka ndị ndụmọdụ mbata na ọpụpụ nke Australia dị ka iwu Australia chọrọ.
Ndị na-ahụ maka ndị mbata na ọpụpụ nke Canada Regulatory Council
Ndị ọkachamara na ndị ọpụpụ na Canada na-enye ndị ahịa anyị ọrụ mbata na ọpụpụ bụ ndị otu ndị Immigration Consultants nke Canada Regulatory Council. Ndị na-ahụ maka Immigrashọn nke Canada Regulatory Council (ICCRC) (Conseil de Réglementation des Consultants en Immigration du Canada (CRCIC)) bụ ikike na-achị obodo niile nke gọọmentị Canada mebere iji lekọta ma kpuchido ndị ahịa chọrọ ọrụ nke ndị na-ahụ maka Immigrashọn Canada.
Ndi otu anyi na aru oru na Latin America bu ndi LACCA. Americanlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ Ndị America na-akpọkọta ndị isi ụlọ na-arụ ọrụ na mpaghara, na-enye ha ohere ịmekọrịta, ịkekọrịta echiche na omume kachasị mma na netwọkụ na ndị ọgbọ n'ofe Latin America.
Ebumnuche iwu European Union bụ iji nye ụmụ amaala, ndị otu na ụlọ ọrụ nchedo Iwu.
Ndị mmekọ Online dị n'ịntanetị
Ekele pụrụ iche zigara Plus, maka nkwado ha na ntụkwasị obi anyị.
Anyị ekwuola ole na ole n'ime Ntinye Aka na Mmekọrịta Anyị.
Maka ebumnuche ọkachamara, ọ siri ike ikpughere ndị otu anyị niile, mana, anyị kpebisiri ike inye gị nkwado na ọrụ kachasị mma, maka ị nweta ebumnuche gị, ebumnuche na ebumnuche gị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'ụwa niile na ọnụahịa asọmpi kachasị mma na ego ndokwa.
* Mara na Anyị anaghị anabata ọrụ ebe anyị nwere ntakịrị obi abụọ iji nye nkwa kachasị mma maka ọrụ.
Nde Ndị na-eme nde bụ otu ihe na-eweta ngwọta maka ịnye ahịa maka azụmahịa nke nwere ike inyere azụmahịa gị aka ọ bụghị naanị maka Ngwọta IT kamakwa ịbawanye ebe obibi kamakwa mba ụwa, ọ bụghị naanị na mmepe weebụ, ngwọta Ecommerce, mmepe ngwa, mmepe ngwa dijitalụ, ngwanrọ software na Mmepe na teklọlọzụ Blockchain maka azụmaahịa gị maka ọnụahịa dị oke ọnụ, mana, anyị na-enyekwa ngwọta na imechi ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ, ọrụ iwu, ị na-ahụ maka ego, Nhazi HR nke ahaziri iche, na-etinye ụlọ ọrụ n'ime iwu 98 ọ bụla dabara adaba maka azụmahịa gị, imepe akaụntụ akụ, ndebanye aha ahia na mba 119 nwere naanị otu ngwa ngwa, ka aha ole na ole.
Anyị bụkwa mmalite, ya mere, anyị ghọtara ihe ndị achọrọ, atụmatụ na ọzụzụ achọrọ, ihe mgbu ahụ. Anyị na-enyere aka, na-akwado ma na-enye anyị ndụmọdụ Mbido ịkwaga n'ụzọ ziri ezi na oge kachasị ngwa iji ụgwọ kachasị dị ala.
Incubation & Ego
Anyị nwere nnukwu netwọkụ nke ndị na - etinye ego mba ofesi, yabụ, dịka nkwado, anyị na - enye aka ijikọ mmalite anyị na ndị nwere ike itinye ego.